Islaan Ciise oo si adag uga hadlay go’aankii madaxweyne Deni kuna hanjabey in reer Garoowe…
June 9, 2021 Xuseen 10
Puntlandtimes (Garoowe)-Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa si adag uga hadlay boobka dhulka iyo dableyda hubaysan ee muddooyinkii ugu dambeeyey bilaabay inay ku dagaalamaan dhulka bannaan ee kuyaal hareeraha magaalada Garoowe.
Madaxweyne Deni ayaa sheegay in ciidanka Puntland ay dagaal culus la geli doonaan cidkasta oo dhulbboob ku howlan isla markaana aan dowladda loo soo raacan doonin ciddii ku dhimata dagaal u dhexeeya ciidanka dowladda iyo malayshiyaadka dhulka booba.
Haddaba, Islaan Ciise Islaan Maxamed oo kamid ah isimada ugu waaweyn Puntland ayaa si adag uga hadlay hadalka madaxweynaha, wuxuuna sheegay inuusan taageeri siin doonin kana daba imaan doonin ciddii dhul lagu dilo.
Islaan Ciise ayaa hoosta ka xariiqay in qofkii dhul boobaya dagaal hubaysanna kala horyaamada ciidanka dowladda uusan hayb iyo qabiil lahayn loona baahan yahay in loo middoobo kooxaha dhibaatada kuhaya magaalada Garoowe.
Ciwaan khaldan iga dhe
Abdalla Jama says:
Maqaalkaan Soomaali ahaan aad buu u khaldan yahay. Lama kala garan karo in Islaanku taageearay hadalkii Madaxweynha iyo in uu ka soo horjeedo. Marka aad qortaan Islaanku hadal adag buu ka yiri khudbaddii Madaxweynaha, micnaheedu waa ka soo horjeedaa.
Kkkk Adeer dhuuso Gaylan bas sheekadaa la dhshaa, ee hs is xanaajin. Intaas uun bas lagaa rabss
waa click iisii maqaal iiriix
Ina Gaylan waa doqon xaalad abuur ah. Waa nin cuqdad qaba oo aan xumaan ta ka xishoon.
Waa CLICK siiya ee ka qaleeya ina Gaylaan ha iska noolaadee.
Dhul cidla ah oo aan hayb lahayn waxaa iska leh cidii ku habsata. Waxay ahayd in Dowladu dhulka yeelato oo ayada iibsigeeda loo soo aado. Waxay ahayd in ay dowladu sharciyeeyso dhulka oo canshuur ka qaado bil walba si ay u yaraato dhul kayd iyo mustaqbal dambe loo haysto. Markii canshuur dhulka laga qaado ma jireyo shaqsi lacag ka buxinaya bil walba dhul uu hada iyo mustaqbalka dhow u baahanahayn
Aqliga ilaahay hakuu siyaadiyo.
Waa xalka sida yahay oo la rabo in dhulka loo maareeyo.
Dowladdu waa in dhulka plan samayso ka dibna dowladda leedahay dhulka oo iibiso sida dalalka hore u maray, meel plan dhul loo samayn cidna ma degi karto, maalinta dhulka leedahay dhiso ama iibso.
Dowladdii ayaa aqli xun marka maxaad ka sugin nin baahan oo dhul boob ah?
Soo dhowow. Waxaad ku indha beeshay KALSHAALE.. Farax Geylan ayaa inoo dhaama kuwa Kalshaale.
Walaal waad mahadsantahay adiga iyo magacaaga qadiimka ah. in kasto aan cidna caqli dhaamin, Dhibaatada soo noqnoqota ee bulshada somaliweyn haysta, waxaa xaataa furdaamin kara dhalanka 6 jirka ah hadii Fursad la siiyo.